Abavelisi beMizi-mveliso yoomatshini kunye nabaXhasi | Umzi mveliso wase China oomatshini
Grafayithi yeziko lokujikeleza
Grafayithi ingasetyenziselwa ukutywina kunye nezinto zokuthambisa, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumatshini wokujikeleza wesamente.Iineenjongo ezimbini eziphambili: enye isetyenziselwa ukutywina intloko yeziko kunye nomsila weziko, kwaye enye isetyenziselwa ukuthambisa phakathi kwevili eliphetheyo kunye ibhanti lamavili. Iimveliso zegrafite ezisetyenziswe kuzo zombini zenziwe ngobume bebhloko.
Laser grafayithi baffle / grafayithi baffle
Grafayithi baffles babe conductivity elungileyo zombane, ukumelana lobushushu eliphezulu, acid kunye nokumelana kwealkali, nokumelana kwaye kulula ukuqhubekekisa.
Iphepha grafayithi Synthetic, grafayithi umboniso, ubushushu eliphezulu sheet grafayithi enganyangekiyo, ubushushu super nombane uqhuba umboniso
Flake grafayithi olungumgubo
I-flake grafite yendalo ngumgubo wendalo wecrystalline, okumilo wentlanzi yephosphorus. Yeyakhe ikristale enamacala amathandathu kunye nesakhiwo sekhombuya. Inezinto ezilungileyo zokumelana nobushushu obuphezulu, ukuqhuba kombane, ukuhambisa ubushushu, ukuthambisa, ukubumba, i-asidi kunye nokumelana nealkali.
Ivili leqela legraphite
Imveliso ine-lubricity elungileyo, amandla aphezulu, ukuxhathisa okuhle kwe-thermal, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ukumelana ne-corrosion, ukumelana ne-oxidation eyomeleleyo, umxholo wokungcola okuphantsi, ubomi obude benkonzo, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumzi-mveliso weglasi yefayibha.
Ucoceko oluphezulu lweBhola yeGrafite
Ucoceko oluphezulu lwebhola yeGrafite isetyenziswa ngokubanzi kwimimandla yokuthambisa iqondo lobushushu eliphezulu, ukuthambisa okuqinileyo, ukutywina okunamandla, isilayidi somlilo, njl. Ngokubanzi, kukho iimfuno eziphezulu zamandla, ubulukhuni, ubungqongqo kunye nokugqitywa komphezulu weebhola zegraphite kwimveliso kunye isicelo, grafithi ye-isostatic yoxinzelelo okanye igrafite ebunjiweyo ikhethwe njengempahla eluhlaza yeebhola zegraphite.
Grafayithi ukuthambisa ajikeleze ikholamu / Intonga / Grafayithi Lubricant Bar
Ngenxa yeempawu zayo zobume, sisithambisi esiqinileyo. Intonga encinci yokuthambisa eyenziwe ngamandla aphezulu kunye nokucoceka okuphezulu kufanelekile ukuthambisa ioyile ngaphandle kweoyile, iipleyiti zokuziqaba, iibheringi zokuthambisa, njl. ukonga izixhobo zokubasa, zihlala zibalulekile kuphuhliso lwamashishini ezomkhosi nezala maxesha kunye nobuchwephesha obuphezulu, obutsha kunye nobuchwephesha. Grafayithi intonga encinci yenye iimveliso grafayithi izicelo mveliso, kunciphisa kakhulu ulondolozo ngoomatshini, iindleko amafutha, iphumelele injongo zombini ukuthambisa ajikeleze kunye non-oyile workpieces processing.
Ubume be-graphite impeller bulungelelaniswa, obunokunciphisa ukunganyangeki xa ujikeleza, kunye nokuxubana kunye namandla e-scour phakathi kwe-impeller kunye nolwelo lwesinyithi kuncinci. Ke, inqanaba lokulahla ngaphezulu kwe-50%, ixesha lokunyibilikisa lifinyeziwe kwaye iindleko zemveliso zincitshisiwe.
Sleeve Grafayithi / grafayithi shaft sleeve
Izinto zeGrafayithi ngokwazo zinokusetyenziswa kwe-lubrication, egqitywe bubume bekristale begraphite. Ukuthambisa kwegraphite kungenxa yokuthambisa kakuhle kwamanzi nomoya, ngaphandle kwesakhiwo se-lattice.
Grafayithi blade for impompo ezincamathelayo
Grafayithi blade, ekwabizwa ngokuba sisilayidi, iblade, isitshisi, ikhabhoni ipleyiti, ikhabhoni iphepha elicokisekileyo, linokubizwa ngokudibeneyo njengelade. Yenziwe ngezinto zecarbonite zecrafite, ezihlala ixesha elide, zilungele ukushicilela i-PCB, i-blister, ifotoelectric kunye namanye amashishini.
Ukuqiniswa kokupakisha kwegraphite
Ukupakishwa kwe graphite okuqinisiweyo kwenziwa ngocingo olucocekileyo olwandisiweyo oluqiniswe yifayibha yeglasi, ucingo lobhedu, ucingo lwentsimbi olungenasici, ucingo lwe-nickel, ucingo lwe-nickel alloy wire, njl njl. amandla. Idityaniswe nokupakisha oklukiwe ngokubanzi, yeyona nto isebenzayo yokutywina ukusombulula ingxaki yokutywinwa kobushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu.